Bogga ugu weyn|Xafiiska Ombuds-ka ee Naafada Koritaanka ee Gobolka ayaa furay degel la heli karo
www.ddombuds.org wuxuu soo bandhigayaa macluumaad, ilo, soo gudbinta cabashada khadka tooska ah si loogu adeego kuwa naafada koriinka ah
OLYMPIA, WA - Xafiiska Ombuds-ka Naafada Koritaanka wuxuu ka hirgaliyay degel cusub barta www.ddombuds.org halkaas oo booqdayaashu ku baran karaan waxa xafiiska ka socda, soo gudbinta cabashooyinka iyo marin u helka ilaha kale ee dadka naafada ah. Boggan waxaa sameeyay shirkadda AccessibilityOz, oo ah shirkad ku takhasustay sameynta bogag ay heli karaan dadka naafada ah.
Websaydhku waa hal dariiqo oo cabasho loogu gudbiyo Dacwadaha Naafada Koritaanka. Cabashooyinka sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa taleefanka 1-833-727-8900 iyo shaqsi ahaan markay qareennada booqdaan guryaha bulshada, barnaamijyada ama xarumaha gobolka. Wac ama booqo websaydhka wixii macluumaad ah ee ku saabsan codsashada booqashada.
Qof kasta, oo ay ku jiraan shaqsiyaadka naafada ah, asxaabta, qoyska ama shaqaalaha daryeelka ayaa soo gudbin kara cabasho ku saabsan adeegyada naafonimada koritaanka. Cabashooyinka waxay ku saabsan yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, xadgudub iyo dayac, tayo iyo helitaanka adeegyo ama dhiig-miirasho suurtagal ah.
"Cabashooyinka ku saabsan xadgudubka, dayacaadda iyo dhiig-miirashada waa mudnaanta," ayay tiri Betty Schieterman, Ombuds-ka Horumarinta Naafada ee Gobolka. Hadafkeena at Ombuds-ka DD waa inaan wax ka qabano cabashooyinka qaab shaqsiyan ku saleysan iyadoo la dhageysanayo dadka qaba naafonimada koritaanka iyo xalinta arrimaha si ay ugu qancaan. ”
Xafiiska Ombuds-ka DD waa xafiis gaar loo leeyahay, madax-bannaan oo diiradda lagu saaray hagaajinta nolosha dadka qaba naafonimada korriinka ee Gobolka Washington. DD Ombuds-ku waxay kaloo siiyaan macluumaad bulshada, kormeerida iyo dib u eegista tas-hiilaadka, waxay sameeyaan baaritaanno, waxay qoraan warbixinno, waxayna ku taliyaan in wax laga beddelo kuwa sameeya siyaasadda Gobolka Washington.
Waaxda Ganacsiga ayaa la siiyay Xuquuqda Naafada Washington qandaraaska siinta adeegyada ombuds ee barnaamijka Ombuds-ka Horumarinta Naafada Washington.
Agaasimaha ganacsiga Brian Bonlender ayaa yidhi “Maalgashiga si kor loogu qaado awooda gobolkeena si aan ugu adeegno dadka nugul ayaa ah muhiimada koowaad ee shaqada ganacsiga ee xoojinta bulshada.
The Sharci-dejinta gobolka ayaa abuurtay Xafiiska Ombuds-ka Naafada Koritaanka si loo caawiyo ilaalinta caafimaadka iyo ladnaanta shakhsiyaadka leh naafonimada koritaanka. Xafiisku wuxuu kormeeri doonaa oo ka warbixin doonaa adeegyada laga bixiyo gobolka Washington xaaladaha ka dhalan kara xadgudubka iyo dayaca.
"Waxaan kafaala qaaday sharciga si loo abuuro xafiiskan maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah dadkayaga aadka u nugul ayaa ku haray xaalado aan amaan ahayn oo xadgudub ah," ayuu yiri Sen. Steve O'Ban, R-University Place. "Tani waxay siinaysaa u doodaha qoysaska inay la shaqeeyaan Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka si loo hubiyo badbaadada shakhsiyaadka naafada ah xagga caqliga ama koritaanka."
Xafiiska Ombuds-ka Horumarinta Naafada Kormeerka wuxuu kormeeri doonaa xarumaha la deggan yahay, guryaha la deggan yahay, iyo adeegyada, wuxuuna talooyin siin doonaa Sharci-dejinta wixii dib-u-habeyn ah
"Waxaa sharaf noo ah inaan qabanno shaqadan waxaanan kalsooni ku qabnaa in dadaalladani ay horseedi doonaan hagaajinta nidaamyada adeeg bixinta ee guud ahaan Washington," ayuu yiri Schwieterman.
Naafada Koritaanka WashingtonWar-saxaafadeedwakiilkaXoojinta bulshada
← GreenRubino si loo horumariyo qorshaha suuqgeynta dalxiiska cusub ee gobolka Washington Gov. Inslee si ay u bilowdo dadaalka sanadka ee Washington Maritime BLUE →